Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo Qaar Kamid Ah Saraakiisheeda Ku Eedaysay Musuq Maasuq.
Kooxda TPLF oo Qaar Kamid Ah Saraakiisheeda Ku Eedaysay Musuq Maasuq.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay qaar kamid ah saraakiisha wayaanaha iyo xubno ganacsatada waawayn ee Itoobiya kamid ah.
Sida xogta aan kuhelayno amar kasoo baxay taliska guud ee wayaanaha ayaa ciidanka wayaanaha lagaga dalbaday in ay xabsiga dhigaa 26 kamid ah saraakiisha wayaanaha oo kumagacaaban xilil sarsare oo maamulka gumaysiga ah iyo kuwaas oo dhamaantood si dag dag ah loogu soo xidhay xarumaha dadka lagu ciqaabo ee magaalada Addis Ababa.
Sidoo kale wareegtada hogaanka sare ee wayaanaha ayaa lagu xusay in lagu soo xidh xidho 7 xubnood oo kamid ah ganacsatada ugu magaca iyo maamuuska badan guud ahaan wadanka Itoobiya, waxayna nacamlayaasha talisku xabsiga usoo taxaabeen 7 dii xubnood ee ganacsatada ahayd.
Dhinaca kale wareegtada ayaa ciidanka wayaanaha lagaga dalbadan in ay soo xidhaan hal nin oo dilaal ah kaas oo sida lasheegay kashaqeeya waxyaabaha lakala iibiyo, kaas oo isna lagu soo xidhay mid kamid ah xabsiyada magaalada Addis Ababa.
Xubnahan oo guud ahaan 34 qof ah ayaa lasheegayaa in lagu eedeeyay musuq maasuq iyo wax isdaba marin, waxaana wareegtada taliska wayaanaha lagu qoray in ay hanti badan oo shacabku lahaa lunsadeen saraakiisha iyo ganacsatada lasoo xidh xidhay ama lasoo eedeeyay.
Talaabadan ayaa waxgaradka iyo shacabka wadanka kudhaqan kunoqotay yaab iyo amakaag waxayna layaabeen kooxdii aabaha musuq maasuqa ahayd oo maanta eedaynaysa saraakiil hoose iyo qaar kamid ah ganacsatada wadanka.
Dadka arimaha Itoobiya udhuun duleela ayaa sheegaya in taliska wayaanuhu uu arintan iskaga jeedinayo indhaha caalamka iyo shacabka kacdoon wadayaasha ah oo intoodabadan kakacay cadaalad darada iyo musuqa hadheeyay madaxda wadanka ugu saraysa.
Hase yeeshee dadwaynaha kasoo horjeeda taliska wayaanaha iyo kooxda TPLF ayaan dhag jalaq usiinaynin isku day kasta oo lagu marin habaabinayo waxayna shacabku diyaar uyihiin halganka ay xuquuqdooda kuraadinayaan.
Arintan ayaa umuuqata lama canaantaan baa caanihii daadiyay, waxaana wax lalayaabo ah in taliska wayaanuhu uu cid maamul hoosaad kiisa ah musuq ku eedeeyo iyadoo la ogyahay dhaqanka wayaanaha ee hanti boobka kusalaysan.